China Tattoo Adjustable Haute Black Arm Rest Rest Manufacture and Factory | MOLONG
Fiatoana amin'ny sandry
Fitsaharana vita amin'ny sandan'ny hoditra avo lenta.
Azo ovaina amin'ny teboka 3 samihafa.
Mora entina - Portable
Mifanentana amin'ny raharaha fitoriana!
Vidiny mety - Mifaninana
Maharitra & maharitra & Miorina
Safidy mety ho an'ny Tattoo Studio
Ity seza tatoazy matihanina azo ovaina azo entina ity dia azo ahitsy tsy esorina ny faritra.
Ny takelaka vita amin'ny tratra dia fenoina hahazoana fampiononana bebe kokoa ho an'ny lahy sy ny vavy.
Ny seza, ny sandry, ny tratra ary ny lohan-doha dia azo ovaina tanteraka.
Karazan-javatra: Fiadiana amin'ny tatoazy
Fitaovana: vy + hoditra vita amin'ny hoditra
Item loko: Mainty
Pad Black size: manodidina ny. 22 x 17 cm / 8.7 x 6.7 inch
Haavo azo ovaina: eo ho eo. 83-136 sm / 31.5-52.8 santimetatra
Fitaovam-piadiana amin'ny tombokavatsa matihanina
Azonao atao ny manamboatra ny haavony sy ny sandry amin'ny toerana samihafa.
Ny famolavolana ergonomika dia ahafahanao manitsy azy amin'ny zoro rehetra mba hametahana ny asan'ny tatoazy.
Atosiho ny bokotra ary ampitomboy hatrany amin'ny zoro tianao. Raha tsy izany, ny pivot na ny zoro dia manjary mandroso na miverina
Mora entina amin'ny fandehanana sy amin'ny fampisehoana tatoazy ity sandry sandry ity.
Mizara ho ampahany 3 ary tena maivana ary ampahany kely
Maharitra ihany koa io sandry sandry io ary mora diovina.
Adidy azo ovaina sy mavesatra tanteraka
- Pad malefaka sy mahazo aina amin'ny sisin-tanana, tongotra na tongotra.
- Ny famolavolana ergonomika dia ahafahanao manitsy azy amin'ny zoro rehetra (mihoatra ny 180 degre) hahafahana miasa amin'ny tatoazy.
- Haavo azo ovaina amin'ny filàna samihafa.
- Pad malefaka sy mahazo aina ho an'ny sandry, tongotra na tongotra hitsaharana, hampitombo ny fampiononan'ny mpanjifa.
- Ny Tripod stand dia mamatsy maharitra sy tsy mihetsika (Tongotra vy misy tendrony vita amin'ny fingotra).
- Azo entina sy azo afindra, mora tehirizina na entina.
【Adjustable haavo】 Ny haavo dia azo ovaina amin'ny 65cm ka hatramin'ny 125cm hifanaraka amin'ny filanao samihafa, manome anao sy ny mpanjifanao traikefa nahafinaritra. Fahaiza-mitondra matanjaka, ny fijanonan'ny sandry dia afaka manome fanampiana ampy ho an'ny olona manana lanja samy hafa
【Azo esorina】 Tsy azo esorina ity fitsaharana amin'ny sandan'ny tatoazy ity, mora tehirizina sy entina, mamonjy toerana fitehirizana bebe kokoa rehefa tsy mila ny toeran'ny tripod ianao. Ny pad dia ahafahanao manamboatra zoro mihoatra ny 180 degre ho an'ny asan'ny tatoazy rehetra.
【Anti-Skid】 Ny tongotra tongotra vy miaraka amin'ny tendrony dia manome fahatoniana amin'ny fanaovana tatoazy, Anti-skid nefa tsy mikororosy ny gorodona, azo ampiharina sy maharitra. Vokatra tsara ho an'ny salon tatoazy matihanina na mpanakanto tatoazy manokana.
Service Serivisy tokana】 Raha manana fanontaniana momba ny entanay ianao dia mifandraisa aminay amin'ny mailaka. Faly izahay manampy anao hamaha ny olana. Ny serivisy ho an'ny mpanjifa miavaka dia izay ataontsika ihany!
Previous: Machine KingKong 3 Tattoo Cartridge
Manaraka: Fitaovam-pandrefesana vita amin'ny silika azo ovaina azo ampiasaina (25pcs / boaty)
Haavo matevina miendrika vy vita amin'ny tombokavatsa Re ...